नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : एक हप्ता नबित्दै अमेरिकामा तीन जना नेपालीको सडक दुर्घटनामा मृत्‍यु ! ३८ बर्सीय सरिता शाक्यको पनि सडक दुर्घटनामा नै ज्यान गयो क्यालिफोर्नियामा !
एक हप्ता नबित्दै अमेरिकामा तीन जना नेपालीको सडक दुर्घटनामा मृत्‍यु ! ३८ बर्सीय सरिता शाक्यको पनि सडक दुर्घटनामा नै ज्यान गयो क्यालिफोर्नियामा !
अमेरिकामा यो हप्ता नेपालीहरुका लागि निकै दु:खद तीन सडक दुर्घटना भए जहाँ ३ नेपालीको ज्यान गयो । अस्लेशा पण्डित, ममता कंडेलको सडक दुर्घटनामा ज्यान गए लगत्तै फेरी अर्की ३८ बर्सीय सरिता शाक्यको पनि सडक दुर्घटनामा नै ज्यान गएको छ । अमेरि काको क्यालिफोर्निया राज्यको सान्डियागोमा एक जना नेपाली महिला सरिता शाक्यको गाडि दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । बिगत दश बर्षदेखि सान्डियागोमा बस्दै आएकी शाक्यलाई शनिबार सांझ मादक पर्दाथ सेवन गरेर गाडि चलाउने चालकले गलत मार्गमा आएर दुर्घटना गराउंदा ज्यान लिएको प्रहरीले बाटएको छ । अमेरिकामा कार दुर्घटनामा केही हप्ता अघी एकै परिवारका ४ जनाको पनि
ज्यान गैसकेको छ भने ५ जना घाइते छन ।